Home Wararka Farmaajo oo ciidan ku boobaya kuraasta 3 deegaan doorasho
Farmaajo oo ciidan ku boobaya kuraasta 3 deegaan doorasho
Madaxweynaha mudo xileedkiisa dastuuriga ah uu dhamaaday 8 February 2021 Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ciidan u adeegsanaya boobka doorashada 16-ka kursi ee Garbahaarey, 25-ka Beledweyne iyo 26-ka Baraawe sida aay ogaatay MOL.
Beledweyne oo ah magaalo siyaasad ahaan cabursan, ayaa waxaa yaalla 25 kursi, waxaana magaaladaasi ku sugan ciidano diyaarado looga qaaday Magaaladda Muqdisho si loogu boobo kuraastaas oo fursad lama filaan ah siisay kooxda madaxweyne Farmaajo.
Waxay magaalada kasoo saareen General Xuud, waxay geeyeen ciidan ayaga si gooni ah uga amar qaata, waxay la heshiiyeen Yuusuf Dabageed, dhawaana waxay magaalada xoog ku geeyeen Cali Guudlaawe.
Kuraasta taalla Baraawe xubnihii horay ugu fadhiyey inta badan waxay ahaayeen kuwa Farmaajo taabacsan, laakiin waxaa jira liiska cusub oo dad badan ka takhalusaya, sida ay xaqiijiyeen illo muhiim ah.
Inkastoo Farmaajo uu guud ahaan shaqo culus ka qabsaday kuraasta Koonfur Galbeed, hadana Baraawe waa aag gaar ah oo kooxdiisa ay gacanta kula jirto
Seddexdaan magaalo ee Beledweyne, Baraawe iyo Garbahaarey guud ahaan waxaa taalla 67 kursi oo Golaha Shacabka ka tirsan, marka la fiiriyo xaaladaha magaalooyinkaas ee xagga amniga iyo siyaasadaba waxa ay u muuqdaan in Farmaajo ciidan ku boobayo manajirto ilaa iyo hada cid qaaday talaabooyin looga hortagayo.
Previous articleHeshiis dhex maray Madaxweyne Cali Guudlaawe iyo Odayaasha Beesha Xawaadle
Next articleSomaliland: Heshiis laga gaaray isticmaalka xadhiga Fiber Optic-ga ee Internet-ka
Mala Gudboon tahay Midowga Musharixiinta ineey is difaacan?